ကားတစ်စီးမှာ အရေးပါလှတဲ့ အသက်ကယ်လေအိတ်နှင့် လုံခြုံရေးခါးပတ် တွေ ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲ…. – Nyi Ma Lay
ကားတစ်စီးမှာ အရေးပါလှတဲ့ အသက်ကယ်လေအိတ်နှင့် လုံခြုံရေးခါးပတ် တွေ ဘယ်လို အလုပ်လုပ်သလဲ….
မော်တော် ယာဉ်ကုမ္ပဏြီ ကီးများနှင့် ဆက်စ ပ်ကုမ္ပဏီများက ယာဉ်မေ တာ်တဆ ဖြစ်ပွားမှုများ၌ လူသားတို့အသ က်အန္တရာယ် လျှော့ချပေးနို င်မည့် နည်းလမ်းများ ကို တီထွင်ဖ န်တီးကြရာမှ အသက်ကယ်ေ လအိတ် စနစ် SRS(Supplemental Restraint System) ပေါ်လာ လာတာ ဖြစ်ပါသည်။
၁၉၈၉ ခုနှ စ်တွင် ယာဉ်မော င်းလေအိတ် (Driver Airbag) အား စတင်ကာတ ပ်ဆင် အသုံးပြုခဲ့ကြပြီး၊ ၁၉၉၂ ခုနှစ်တွင် ဘေးကထိုင်စီးသူအတွက် လေအိတ် (Passenger Airbag) များကိုပါတပ်ဆင် နိုင်ခြဲ့ ကပါသည်။ ယနေ့အချိန် မှာတော့ ဘေးကာေ လအိတ် (Side Airbag)၊ ဘေးတံခါးပြ တင်းပေါက်လေအိတ် (Curtain Airbag)၊ ခြေထောက်ပို င်းလေအိတ် (Knee Airbag) စသည်တို့ကို အဆင့် ဆင့်တိုးတက်ကာ ကားအမျိုးအ စားေ ပါ်မူတည်ကာ ပါဝင်လာခဲ့ကြပါပြီ။
လေအိတ် တပ်ဆ င်ထားသော ကားတစ်စီး ယာဉ်မတော်တဆမှုြ ဖစ်ရာတွင် အသက်က ယ်လေအိတ် ပွင့်ရန်အတွက် အရေးကြီးဆုံး အချက်မှာ SRS လေအိတ်စနစ် ပိုင်း ပုံမှန်ရှိနေရန်လိုအ ပ်ပါသည်။ လေအိတ်စ နစ်ပိုင်း ပုံမှန်ရှိရန် အတွက် ကားစက်နိုးပြီး ချိန်တွင် လေအိတ်ပုံမီးလေး မလင်းနေရန် လို အပ်ပါသည်။ လေအိတ် ပုံမီးအနီလေး လင်းနေပါက လေအိတ်စနစ် ပိုင်းဆိုင်ရာ ချို့ယွင်းချက်ရှိနေ သဖြင့် ယာဉ်မတော်တ ဆဖြစ်ပွားပါက အသက်ကယ်ေ လအိတ် အလုပ်လုပ်မည် မဟုတ်သဖြင့် လေအိတ်မပွင့်နိုင်ပါ။
မော်တော်ယာဉ် မတော် တဆဖြစ်ချိန်တွင် အသက်ကယ်ေ လအိတ် ပွင့်ထွက်ကာ အလုပ် လုပ်စေရန် ထိန်းချုပ်ပေးသော အဓိက အရာများမှာ အင်ဂျင်ကွန် ထရိုးဘောက် ECU (Engine Control Module)၊ အရှိန်တိုင်းကိရိယာ (Accelerometer)၊ ယာဉ်တိုက် မှုအရှိန်အ ကျိုးသက်ရော က်မှု ဆင်ဆာ (Impact Sensor)၊ ဘေးဘက်ထိခိုက် မှုအာရုံခံ ဆင်ဆာ (Side Door Pressure Sensor)၊ ဘီးအရှိန်နှုန်း တိုင်းဆင်ဆာ (Wheel Speed Sensor)၊ ယာဉ်တည်ငြိ မ်မှုအာရုံခံ ဆင်ဆာ (Gyroscopes Sensor)၊ ဘရိတ်အာရုံခံ ဆင်ဆာ (Brake Pressure Sensor)၊ ထိုင်ခုံအာရုံခံ ဆင်ဆာ (Seat Occupancy Sensor) အစရှိသော ဆင်ဆာများပေါ်က ထိန်းချုပ်ကာ လေအိတ်အလု ပ်လုပ်စေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
အင်ဂျင်ကွန် ထရိုးဘောက်နှင့် အရှိန်နှုန်းတိုင်း ကိရိယာတို့က ကား အမှန်တကယ် မောင်းနှင်နေသည် ဟုတ်/မဟုတ်ကို ဘီးများက ပေးပို့သော အရှိန်နှုန်းတိုင်းကိရိ ယာများ ထံမှရယူ ကာအတည်ပြုပြီး ယာဉ်တိုက်မှုဖြစ်ချိန်တွင် Impact Sensor မှပေးပို့သော သက်ရောက် မှု့အရှိန်နှင့် G Sensor မှပေးပို့သော ယာဉ်တုန် ခါမှုနှင့် မတည်ငြိမ်မှု၊ ဘရိတ်ဆင်ဆာမှ ရုတ်တရ က်နင်းလိုက်သော အရှိန်နှုန်း တို့ပေါ်မူ တည်ကာ ထိုင်ခုံအာရုံခံ ဆင်ဆာမှ မည့်သ ည့်ထိုင်ခုံတွင် လူစီးနင်းလိုက်ပါသည်ကို အချက်ပေးကာ လူရှိသော ထိုင်ခုံတွင် လေအိတ်များကို ယာဉ်တိုက်မှု အခြေအနေကို လိုက်ကာ ပွင့်အောင်လုပ်ဆောင်ပေးခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ နောက်ဆုံး လေအိတ်ပွင့်ေ ပးရန်ဆုံးဖြ တ်ချက်ကို အထက်ပါ အချက်အလက်များမှ ရယူကာ SRS Control စနစ်မှ ဆုံးဖြတ်ပေးပါသည်။
အချို့ကားများတွင် ထိုင်ခုံခါး ပတ် ပတ်ထားမှသာ လေအိတ်ပွင့်ေ ပးသော်လည်း အချို့ကားမော်ဒ ယ်များတွင်တော့ ထိုင်ခုံခါးပတ် မပတ်ထား သည့်တိုင် လေအိတ်ပွ င့်ပေးပါသည်။ သို့သော် ထိုင်ခုံခါးပတ်မှာ ကားပေါ်စီးနင်းလိုက်ပါသူတိုင်း မောင်းနှင်သူတိုင်းသည် မဖြစ်မနေ ပတ်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
ထိုင်ခုံခါးပတ်သည် ယာဉ်မတော် တဆဖြစ်ချိန်တွင် စီးနင်းလိုက် ပါလာသူအား လွင့်မထွက်သွားစေရန် ရှေ့ရှိအရာဝတ္ထုများနှင့် ခေါင်းမျက်နှာတို့နှင့် မတိုက်မိစေရန် ကာကွယ်ပေး သည့်အပြင် လေအိတ်ပွင့်ထွက် လာချိန်တွ င်လည်း ခါးပတ်ပတ်မထားပါက လေအိတ်ပွင့်ထွက်ေ သာအရှိန်နှင့် လူမှလည်းရှေ့သို့ထွက်သွားေ သာအရှိန်တို ့ပေါင်းဆုံကာ နှလုံးထိခိုက်ကာ အသက်ဆုံးရှုံးြ ကရသည်အထိ ဖြစ်ပွားတတ် ပါသည်။
SRS ထိန်းချုပ်စနစ်မှ လေအိတ် ပွင့်စေရန် နောက်ဆုံး ဆုံးဖြတ်ချ က်ပေးရခြင်းမှာ သတ်မှတ်ထားသော အရှိန်မဟုတ်ဘဲ လေအိတ်မ ပွင့်စေရန်နှင့် လေအိတ်၏ အာရုံခံဆင်ဆာတစ် ခုဖြစ်သော Impact Sensor အားထုမိ ရိုက်မိပါက လေအိ တ်မပွင့်စေရန် အတွက်နှင့် အမှန်တကယ် ယာဉ်မတော်တ ဆမှုဖြစ်သော အချိန်နှင့် သတ်မှတ်အရှိန်နှုန်းသို့ရောက်မှသာ လေအိတ်ပွင့်စေရန် အတွက်ဖြ စ်ပါသည်။
မော်တော်ယာဉ် များသည် အမျိုးအစားကိုလို က်ကာ ကီလို ၂၀ မှ ၃၀ အောက်ယာဉ်တိုက်မှုများတွင် လေအိတ်မပွ င့်ပေးကြသည် လည်း ရှိပါသည်။ မိမိကားသည် ကီလို ၂၀ မှ ၃၀ အတွင်းသာ မောင်းနှင် လာသော်လည်း အခြားတစ်ဖက်မှ ဝင်ရောက်တိုက်မိသော ကားအရှိန်သည် အလွန်ပြင်းထန်ပါက Impact Sensor ၏ ထိခိုက်မှုအရှိန်အကျိုး သက်ရောက်မှု နှင့် G sensor ၏ တုန်ခါမှုတို့ကိုလိုက်ကာ SRS ကွန်ထရိုးစနစ်မှ လေအိတ်ပွင့်စေကာ ကာကွယ်ပေးပါသည်။
လေအိတ်ပွင့်စေ ရန်အတွက် Gas Generator သဘောပုံစံမျိုးဖြင့် ဓာတ်ငွေ့ကို အသုံးပြုစေကာ လေအိတ်ကို အမြန်ဆုံး ပွင့်စေခြင်းဖြစ်ပြီး အသုံးပြုထားေ သာ ဓာတ်ငွေ့များမှာ ထုတ်လုပ်သော ခုနှစ်နှင့် ကားအမျိုး အစားကိုလိုက်ကာ ကွဲပြားခြားနား မှုရှိကြပါသည်။
မော်တော်ယာဉ်တစ်စီး မတော်တဆမှုြ ဖစ်ချိန်တွင် လေအိတ်ပွင့်ရန်ြ ကာမြင့်ချိန်မှာ တစ်စက္ကန့်၏ ဆယ်ပုံ တစ်ပုံမှ သုံးပုံအထိ (0.1 to 0.3 Sec) သာကြာမြင့်၍ လေအိတ်ထွ က်လာသော အရှိန်နှုန်းမှာ မော်တော် ယာဉ် အမျိုးအစားကိုလိုက်ကာ တစ်နာရီ ကီလို ၁၀၀ မှ ၃၀၀ အထိ (100 to 300km/hr) အရှိန်အထိပြင်းထ န်ပါသည်။ လေအိတ်ပွင့်ချိန်သည် အလွန်မြန်ဆန်ကာ အရှိန်လည်းများပါသည်။ ထို့ကြောင့် မော်တော်ယာဉ်မော င်းနှင်ချိန်များတွင် ထိုင်ခုံခါးပတ်ကို မဖြစ်မနေ ပတ်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
မော်တော်ကား ဆိုသည်မှာ မိမိထိန်း သိမ်းနိုင်သော အရှိန်နှုန်းလောက်သာ မောင်းနှင်ရန် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်ပြီး၊ အသက်က ယ်လေအိတ်နှင့် လုံခြုံရေး ခါးပတ်တို့ဆိုသည် မှာလည်း အရှိန်နှုန်း အတိုင်းအ တာတစ်ခုအတွင်း၌သာ ကာကွယ်ပေးနိုင်စွ မ်းရှိကြောင်း အသိပေးရင်း…. ရေးသားသူ – ကိုတိုး (အွန်လိုင်းကားဝပ်ရှော့)
ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ကုမၸႀဏီ ကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္စ ပ္ကုမၸဏီမ်ားက ယာဥ္ေမ တာ္တဆ ျဖစ္ပြားမႈမ်ား၌ လူသားတို႔အသ က္အႏၲရာယ္ ေလၽွာ့ခ်ေပးနို င္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ကို တီထြင္ဖ န္တီးၾကရာမွ အသက္ကယ္ေ လအိတ္ စနစ္ SRS(Supplemental Restraint System) ေပၚလာ လာတာ ျဖစ္ပါသည္။
၁၉၈၉ ခုႏွ စ္တြင္ ယာဥ္ေမာ င္းေလအိတ္ (Driver Airbag) အား စတင္ကာတ ပ္ဆင္ အသုံးျပဳခဲ့ၾကၿပီး၊ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ေဘးကထိုင္စီးသူအတြက္ ေလအိတ္ (Passenger Airbag) မ်ားကိုပါတပ္ဆင္ နိုင္ျခဲ့ ကပါသည္။ ယေန႔အခ်ိန္ မွာေတာ့ ေဘးကာေ လအိတ္ (Side Airbag)၊ ေဘးတံခါးၿပ တင္းေပါက္ေလအိတ္ (Curtain Airbag)၊ ေျခေထာက္ပို င္းေလအိတ္ (Knee Airbag) စသည္တို႔ကို အဆင့္ ဆင့္တိုးတက္ကာ ကားအမ်ိဳးအ စားေ ပၚမူတည္ကာ ပါဝင္လာခဲ့ၾကပါၿပီ။
ေလအိတ္ တပ္ဆ င္ထားေသာ ကားတစ္စီး ယာဥ္မေတာ္တဆမႈျ ဖစ္ရာတြင္ အသက္က ယ္ေလအိတ္ ပြင့္ရန္အတြက္ အေရးႀကီးဆုံး အခ်က္မွာ SRS ေလအိတ္စနစ္ ပိုင္း ပုံမွန္ရွိေနရန္လိုအ ပ္ပါသည္။ ေလအိတ္စ နစ္ပိုင္း ပုံမွန္ရွိရန္ အတြက္ ကားစက္နိုးၿပီး ခ်ိန္တြင္ ေလအိတ္ပုံမီးေလး မလင္းေနရန္ လို အပ္ပါသည္။ ေလအိတ္ ပုံမီးအနီေလး လင္းေနပါက ေလအိတ္စနစ္ ပိုင္းဆိုင္ရာ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ရွိေန သျဖင့္ ယာဥ္မေတာ္တ ဆျဖစ္ပြားပါက အသက္ကယ္ေ လအိတ္ အလုပ္လုပ္မည္ မဟုတ္သျဖင့္ ေလအိတ္မပြင့္နိုင္ပါ။
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မေတာ္ တဆျဖစ္ခ်ိန္တြင္ အသက္ကယ္ေ လအိတ္ ပြင့္ထြက္ကာ အလုပ္ လုပ္ေစရန္ ထိန္းခ်ဳပ္ေပးေသာ အဓိက အရာမ်ားမွာ အင္ဂ်င္ကြန္ ထရိုးေဘာက္ ECU (Engine Control Module)၊ အရွိန္တိုင္းကိရိယာ (Accelerometer)၊ ယာဥ္တိုက္ မႈအရွိန္အ က်ိဳးသက္ေရာ က္မႈ ဆင္ဆာ (Impact Sensor)၊ ေဘးဘက္ထိခိုက္ မႈအာ႐ုံခံ ဆင္ဆာ (Side Door Pressure Sensor)၊ ဘီးအရွိန္ႏႈန္း တိုင္းဆင္ဆာ (Wheel Speed Sensor)၊ ယာဥ္တည္ၿငိ မ္မႈအာ႐ုံခံ ဆင္ဆာ (Gyroscopes Sensor)၊ ဘရိတ္အာ႐ုံခံ ဆင္ဆာ (Brake Pressure Sensor)၊ ထိုင္ခုံအာ႐ုံခံ ဆင္ဆာ (Seat Occupancy Sensor) အစရွိေသာ ဆင္ဆာမ်ားေပၚက ထိန္းခ်ဳပ္ကာ ေလအိတ္အလု ပ္လုပ္ေစျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
အင္ဂ်င္ကြန္ ထရိုးေဘာက္ႏွင့္ အရွိန္ႏႈန္းတိုင္း ကိရိယာတို႔က ကား အမွန္တကယ္ ေမာင္းႏွင္ေနသည္ ဟုတ္/မဟုတ္ကို ဘီးမ်ားက ေပးပို႔ေသာ အရွိန္ႏႈန္းတိုင္းကိရိ ယာမ်ား ထံမွရယူ ကာအတည္ျပဳၿပီး ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ခ်ိန္တြင္ Impact Sensor မွေပးပို႔ေသာ သက္ေရာက္ မႈ႔အရွိန္ႏွင့္ G Sensor မွေပးပို႔ေသာ ယာဥ္တုန္ ခါမႈႏွင့္ မတည္ၿငိမ္မႈ၊ ဘရိတ္ဆင္ဆာမွ ႐ုတ္တရ က္နင္းလိုက္ေသာ အရွိန္ႏႈန္း တို႔ေပၚမူ တည္ကာ ထိုင္ခုံအာ႐ုံခံ ဆင္ဆာမွ မည့္သ ည့္ထိုင္ခုံတြင္ လူစီးနင္းလိုက္ပါသည္ကို အခ်က္ေပးကာ လူရွိေသာ ထိုင္ခုံတြင္ ေလအိတ္မ်ားကို ယာဥ္တိုက္မႈ အေျခအေနကို လိုက္ကာ ပြင့္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ေနာက္ဆုံး ေလအိတ္ပြင့္ေ ပးရန္ဆုံးၿဖ တ္ခ်က္ကို အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားမွ ရယူကာ SRS Control စနစ္မွ ဆုံးျဖတ္ေပးပါသည္။
အခ်ိဳ႕ကားမ်ားတြင္ ထိုင္ခုံခါး ပတ္ ပတ္ထားမွသာ ေလအိတ္ပြင့္ေ ပးေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကားေမာ္ဒ ယ္မ်ားတြင္ေတာ့ ထိုင္ခုံခါးပတ္ မပတ္ထား သည့္တိုင္ ေလအိတ္ပြ င့္ေပးပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုင္ခုံခါးပတ္မွာ ကားေပၚစီးနင္းလိုက္ပါသူတိုင္း ေမာင္းႏွင္သူတိုင္းသည္ မျဖစ္မေန ပတ္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ထိုင္ခုံခါးပတ္သည္ ယာဥ္မေတာ္ တဆျဖစ္ခ်ိန္တြင္ စီးနင္းလိုက္ ပါလာသူအား လြင့္မထြက္သြားေစရန္ ေရွ႕ရွိအရာဝတၳဳမ်ားႏွင့္ ေခါင္းမ်က္ႏွာတို႔ႏွင့္ မတိုက္မိေစရန္ ကာကြယ္ေပး သည့္အျပင္ ေလအိတ္ပြင့္ထြက္ လာခ်ိန္တြ င္လည္း ခါးပတ္ပတ္မထားပါက ေလအိတ္ပြင့္ထြက္ေ သာအရွိန္ႏွင့္ လူမွလည္းေရွ႕သို႔ထြက္သြားေ သာအရွိန္တို ့ေပါင္းဆုံကာ ႏွလုံးထိခိုက္ကာ အသက္ဆုံးရႈံးျ ကရသည္အထိ ျဖစ္ပြားတတ္ ပါသည္။
SRS ထိန္းခ်ဳပ္စနစ္မွ ေလအိတ္ ပြင့္ေစရန္ ေနာက္ဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ် က္ေပးရျခင္းမွာ သတ္မွတ္ထားေသာ အရွိန္မဟုတ္ဘဲ ေလအိတ္မ ပြင့္ေစရန္ႏွင့္ ေလအိတ္၏ အာ႐ုံခံဆင္ဆာတစ္ ခုျဖစ္ေသာ Impact Sensor အားထုမိ ရိုက္မိပါက ေလအိ တ္မပြင့္ေစရန္ အတြက္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ ယာဥ္မေတာ္တ ဆမႈျဖစ္ေသာ အခ်ိန္ႏွင့္ သတ္မွတ္အရွိန္ႏႈန္းသို႔ေရာက္မွသာ ေလအိတ္ပြင့္ေစရန္ အတြက္ၿဖ စ္ပါသည္။
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ မ်ားသည္ အမ်ိဳးအစားကိုလို က္ကာ ကီလို ၂၀ မွ ၃၀ ေအာက္ယာဥ္တိုက္မႈမ်ားတြင္ ေလအိတ္မပြ င့္ေပးၾကသည္ လည္း ရွိပါသည္။ မိမိကားသည္ ကီလို ၂၀ မွ ၃၀ အတြင္းသာ ေမာင္းႏွင္ လာေသာ္လည္း အျခားတစ္ဖက္မွ ဝင္ေရာက္တိုက္မိေသာ ကားအရွိန္သည္ အလြန္ျပင္းထန္ပါက Impact Sensor ၏ ထိခိုက္မႈအရွိန္အက်ိဳး သက္ေရာက္မႈ ႏွင့္ G sensor ၏ တုန္ခါမႈတို႔ကိုလိုက္ကာ SRS ကြန္ထရိုးစနစ္မွ ေလအိတ္ပြင့္ေစကာ ကာကြယ္ေပးပါသည္။
ေလအိတ္ပြင့္ေစ ရန္အတြက္ Gas Generator သေဘာပုံစံမ်ိဳးျဖင့္ ဓာတ္ေငြ႕ကို အသုံးျပဳေစကာ ေလအိတ္ကို အျမန္ဆုံး ပြင့္ေစျခင္းျဖစ္ၿပီး အသုံးျပဳထားေ သာ ဓာတ္ေငြ႕မ်ားမွာ ထုတ္လုပ္ေသာ ခုႏွစ္ႏွင့္ ကားအမ်ိဳး အစားကိုလိုက္ကာ ကြဲျပားျခားနား မႈရွိၾကပါသည္။
ေမာ္ေတာ္ယာဥ္တစ္စီး မေတာ္တဆမႈျ ဖစ္ခ်ိန္တြင္ ေလအိတ္ပြင့္ရန္ျ ကာျမင့္ခ်ိန္မွာ တစ္စကၠန႔္၏ ဆယ္ပုံ တစ္ပုံမွ သုံးပုံအထိ (0.1 to 0.3 Sec) သာၾကာျမင့္၍ ေလအိတ္ထြ က္လာေသာ အရွိန္ႏႈန္းမွာ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ အမ်ိဳးအစားကိုလိုက္ကာ တစ္နာရီ ကီလို ၁၀၀ မွ ၃၀၀ အထိ (100 to 300km/hr) အရွိန္အထိျပင္းထ န္ပါသည္။ ေလအိတ္ပြင့္ခ်ိန္သည္ အလြန္ျမန္ဆန္ကာ အရွိန္လည္းမ်ားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေမာ င္းႏွင္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ထိုင္ခုံခါးပတ္ကို မျဖစ္မေန ပတ္ထားရန္ လိုအပ္ပါသည္။
ေမာ္ေတာ္ကား ဆိုသည္မွာ မိမိထိန္း သိမ္းနိုင္ေသာ အရွိန္ႏႈန္းေလာက္သာ ေမာင္းႏွင္ရန္ အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္ၿပီး၊ အသက္က ယ္ေလအိတ္ႏွင့္ လုံျခဳံေရး ခါးပတ္တို႔ဆိုသည္ မွာလည္း အရွိန္ႏႈန္း အတိုင္းအ တာတစ္ခုအတြင္း၌သာ ကာကြယ္ေပးနိုင္စြ မ္းရွိေၾကာင္း အသိေပးရင္း…. ေရးသားသူ – ကိုတိုး (အြန္လိုင္းကားဝပ္ေရွာ့)
Previous post ဖေ့ဘွတ်ရဲ့ CEO ဇူကာဘတ် အသစ်ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့ မီတာဗာ့စ် (Metaverse) ဆိုတာ ဘာလဲ
Next post အသက်တွေကြီးပီး အိုမင်းလာခဲ့ရင် ဘာတွေ ပြင်ဆင်ထားသင့်သလဲ……